Dalka Shiinaha: Maxamkad sii daysay nin 27 sano xabsi ugu jiray dambi uusan galin - Tilmaan Media
Dalka Shiinaha: Maxamkad sii daysay nin 27 sano xabsi ugu jiray dambi uusan galin
in CAALAMKA, BULSHO
Bariga dalka Shiinaha nin xabsi ugu jiray 27 sano dil uusan gaysan ayaa maxkamad dalkaas kutaalla bari yeeshay kadibna amartay in xabsiga laga sii daayo. Waxaa xoriyadiisii loosoo celiyay kadib markii xeer ilaalintu ku qanacday in qirashada uu sameeyay ay ahayd mid aan sax ahayn oo aan waafaqsanayn sida fal dambiyeedku udhacay.
Zhang Yuhuan ayaa sheegay in boolisku jirdil ku sameeyeen si uu u qirto dil labo wiil oo dhallinyaro ah loo gaystay sanadkii 1993 dii. Wuxuu noqday qofkii dambi uuna galin wakhtiga ugu dheer u xirnaa dalka Shiinaha, wuxuuna 9,778 maalmood kujiray xabsi kuyaalla gobolka Jiangxi.
Si farxad iyo xoriyad kamuuqato ayuu xabsiga oga soo baxay kadib soo bixidda go,aanka looga bariyeelay dilka lagu soo eedeeyay. Dowladda Shiinaha ayaa doonaysa inay wax kaqabato dadka xabsiyada ugu jira dambiyada aysan gaysan ama aan caddayn kufilan loo hayn.
Tirada Dhimasahada Koronafayras oo hal malyan kudhaw
Imaanshaha Qaadka Kenya oo bilaabanaysa